Warshadda Balakoonka Shiinaha ee Balcony Window Kinzon50 iyo alaab-qeybiyeyaasha | Kinzon
Balakoonka balakoonka -Kinzon50 waa nidaam isbadal iyo isbadal leh oo qaabaysan. Daaqadan balakoonka leh waxay u suurtagelineysaa jihooyinka isku midka ah ee iswaafajinta in si toos ah loogu dhaqaajiyo mid ama labada dhinacba. Balakoonka balakoonka -Kinzon50 wuxuu isticmaali karaa 5 + 9A + 5 galaas labalaab ah ama galaas 8mm ah. Sidoo kale daaqada balakoonka wuxuu leeyahay astaan ​​guud oo khaas ah oo leh quful leexin oo aan farqiga u dhexeeynin dhalooyinka galaaska. Ballaca ugu sareeya ee balakoonka balakoonka Kinzon50 waa 650mm oo dhererka max waa 2000mm oo galaas kasta. Qaylada hoose, dharka hoose, kuleylka iyo dusha sare ee orodka u adkeysiga.
Sifooyinka daaqada balakoonka Kinzon50 waxay ka dhigeysaa nadiifinta daaqadaha inay aad u fududaan, waxaad ku nadiifin kartaa gadaal iyo wejiga weel kasta oo galaas ah. Balakoonka lagu rakibay daaqadda balakoonka Kinzon50 waxay u egtahay balakoon xirxiran oo hufan, oo kaliya ma dhaawaceyso muuqaalka iyo qaab dhismeedka, laakiin sidoo kale wax badan ayey ka geysaa bilicda qurxinta balakoonka. on profile muraayadaha si looga fogaado in waxyeello. Difaaca ayaa u eg-jaranjarada oo kale iyo furfuristu aad ayey ufiican tahay. Ma jiro farqi u dhexeeya xog-raadinta iyo astaamaha galaaska. Balakoonka balakoonka -Kinzon50 malahan farqiga u dhexeeya muraayadaha galaaska ugu horreeya iyo kan ugu dambeeya ee leh astaamaha muuqaalka.Balcony -Kinzon50 wuxuu adeegsaday kubbado culeys weyn u leh si ay u hoos u dhacaan si tartiib tartiib ah.
Khibraddu waxay la mid tahay tayada oo macquul ah qiimo macquul ah. Balcony daaqadda -Kinzon50 waxay leedahay in ka badan hal milyan oo macaamiil ku qanacsan oo ka kala socda 40 dal iyo 20 sano oo waayo-aragnimo ah. Balakoonka balakoonka -Kinzon50 wuxuu xanaaneeyaa talaabo kasta oo howsha ka mid ah, oo lagu taageerayo aqoonta iyo waaya aragnimada ka soo baxday labaatan sano ee cilmi baarista iyo horumarinta wax soo saarka.
Dhamaadka Dusha kore:
daaqadaha alwaax alwaax iyo albaabo
Quraarado Single ama Double tempered
Qalabka korantada / muraayadaha dabka-gala
Albaabka albaabka / garabka albaabka ku xir
Hore: Balakoonka Barafka Nidaamka Kinzon09
Xiga: Balakoonka Barafka Nidaamka Kinzon06